အတူနေ(Living Together)ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး များနားလည်အောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောချလိုက်တဲ့ လှနုထွန်း – Online News Post
အတူနေ(Living Together)ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး များနားလည်အောင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောချလိုက်တဲ့ လှနုထွန်း
ခြုံတိုး ဟိုတယ် တက် ပြီး ပြတ်သွား အပျို ဟန်ဆောင်တဲ့ ခေတ်က ကျန်ခဲ့ ပါပြီ ဥပမာ အရွယ်ရောက် ပြီး အမျိုးသား နဲ့ အမျိုး သမီး နှစ်ယောက် ချစ်ကြိုက် ကြတယ် ဆိုပါစို့ အချိန်တန် ယူမယ် လက်ထပ် မယ် တိုင်ပင် ထားတယ် ဒါပေမယ့် မိဘတွေ နဲ့ အတူ နေနေတာဆိုတော့ ချိန်း တွေ့ရတာ လောက်နဲ့ သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင့် အမှန် မသိဘူး ဟန်ဆောင် နေကြတာလေ သုံးနှစ်သုံးမိုး စောင့်ရင်လည်း အချိန်ကုန် သွားမယ် အသက်ကြီး သွားမယ် မယူဖြစ် ရင် တစ်က ပြန်စ အသစ်ရှာ ရမယ် ။
အိမ်ကို ခွင့်တောင်းပြီး သူ့အလုပ် ကိုယ့် အလုပ် ကြားထဲမှာ အဆင်ပြေတဲ့ အခန်းလေး ငှားနေတယ် ပြီးတော့ ဟင်းထမင်း ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ် အဝတ် လျှော် မီးပူ တိုက် သန့်ရှင်းရေး ကို တာဝန် ခွဲလုပ် အိမ်လခ စျေးဖိုး မီတာခ ကုန်ကျ စရိတ်တွေ နှစ်ယောက် မျှခံ ဒါမျိုးတွေ ကို နှစ်ယောက်သား တာဝန်ယူကြည့်ကြတာ အဲ့မှာ ယောကျ်ား တစ်ယောက်ဟာ ဂိမ်းပဲနှိပ်နေ ပြီး မိန်းမကို ဂရုမစိုက်တဲ့ သူလား ဆဲဆိုပြီး အရပ်တကာနဲ့ ရန်ဖြစ်တတ် သူလား ညဘက် အချိန်မှန် အိမ်ပြန် မအိပ်တတ်တဲ့သူလား သူငယ်ချင်း တသိုက်နဲ့ သောက်စားမူး ယစ် Ktv တက်လား ပြသနာကို ကိုယ့်ဘက် ပါပြီးဖြေရှင်း သလား အဝတ်တွေကို ကွင်းလုံးချွတ်တတ် တာက အစ ရှုးပေါက်ရင် အိမ်သာ မှာ အစက်ကြ တာ ပြန်မသုတ် တတ်တဲ့ သူလား အကုန် လေ့လာ လို့ရတယ် …
မိန်းမတစ်ယောက် ရဲ့ အနေအထိုင် ပက်စက် တာ အပျင်းတစ်ပြီး အိမ်မှုကိစ္စ မလုပ်တာ ဖေ့ဘုတ်ထိုင်ပွတ် ပြီး နေဖင်ထိုး မှထတာ အမေ့ အိမ် ခနခနသွားပြီး အချိန် ဖြုန်းနေတတ်တာ အိမ်အကူ မရှိရင် ဘာမှ မလုပ်တတ် တာ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအကြောင်းအတင်းပြော ပေးစား တတ်တာ ဝင်ငွေ ထွက်ငွေမမျှ ကြွား ဝါ သုံးဖြုန်းတတ် တာ ဒါတွေ လေ့လာလို့ ရတယ် … ညှိကြည့် ရမယ် ပြောပြရ မယ် တလ နှစ်လ ခြောက်လ သင်ပေး ရမယ် တချို့ဆို နှစ်နဲ့ချီ နေတယ် ။ လက်မထပ် ပဲ ကလေးတောင်ယူ လိုက်သေး ။ တချို့ကျတော့ နှစ်ဝက် လောက် ဆို အခြေအနေ မဟန်မှန်းသိပြီ သူကြီး ပျင်းလာတဲ့ Background Behaviour နဲ့ Brought up က ကိုယ် နဲ့ ညှိလို့ မရဘူး သိလာပြီဆို ယဥ်ကျေး စွာ လမ်းခွဲကြရုံ ပဲ …
လခတွေ မိဘကို အပ်ရသလား ၊ မေမေ့သားလေးလား ၊ တခုခုဆို အိမ်ပေါ်ကနေ ဆင်းသွားတတ်လား ၊ဘယ်လို Dark side တွေရှိလဲ သိလာမယ် …
ကလေးရတာမရ တာက family planning ပေါ်မူ တည်ပါတယ် OG ဆီမှာ IUD ထည့် မလား ဆေးသောက် မလား အကာ အကွယ်သုံးမလား က နှစ်ယောက် ပေါ်ပဲမူတည် ပါတယ် LT နေနေ မနေနေ ခြုံတိုး ပြီး ကလေးရလို့ မိဘမဲ့တွေ တပုံကြီးပါ ဒါကို ပတ်ဝန်းကျင် က ဝေဖန်နေ တာ ဂရုစိုက် ရအောင် ကိုယ့်ကို သူတို့မပိုင်ဘူးလေ သမာ အာဇီဝ လုပ်ကိုင် စားသောက်တယ် ပတ်ဝန်းကျင် ကို အနှောက်အယှက် မပေးဘူး ဆိုရပြီလေ ဝေဖန်တယ် ဆိုတာ မနာလိုလို့ပါ LTနေတဲ့ ကိစ္စ က ဟိုတယ်နာရီပိုင်း လို မလွယ်ပါဘူး အိမ်ထောင် တစ်ခု လို တာဝန်ယူရ တာမို့ ဟာသ အနေနဲ့ မမြင်သင့် ပါဘူးရှင် တရားဝင်လက်ထပ်ပြီး မှ စိတ်သဘော မတိုက်ဆိုင် လို့ ကွဲတာထက် စာရင် LT နေ့ကြည့် တာ ပိုအဆင်ပြေပါ တယ် …
ခြုံတိုး ဟိုတယ်တက်ပြီး သမီး အလိမ်မာလေး လို အရုပ် ပိုက်ပြီး ဘေဘီလေး လို ဟန်ဆောင်နေကြတာ ထက် စာရင် အပျိုအစစ်လို တင်ရိုက်နေကြတာထက် စာရင် ဘဝကို ရင်ဆိုင် ဖူးတဲ့ အမျိုးသမီး ကသာ ရင့်ကျက် တဲ့ စိတ်ထားရှိမှာပါ ။ ဘဝကို လက်တွေ့ရုန်းခွင့် ရှိပါတယ် ခြုံတိုး ဟိုတယ် တက် ပြီး ပြတ်သွား အပျို ဟန်ဆောင်တဲ့ ခေတ်က ကျန်ခဲ့ပါပြီ ဒါတွေ က one night stand အထှာ တွေပါ … .
ျခဳံတိုး ဟိုတယ္ တက္ ၿပီး ျပတ္သြား အပ်ိဳ ဟန္ေဆာင္တဲ့ ေခတ္က က်န္ခဲ့ ပါၿပီ ဥပမာ အရြယ္ေရာက္ ၿပီး အမ်ိဳးသား နဲ႔ အမ်ိဳး သမီး ႏွစ္ေယာက္ ခ်စ္ႀကိဳက္ ၾကတယ္ ဆိုပါစို႔ အခ်ိန္တန္ ယူမယ္ လက္ထပ္ မယ္ တိုင္ပင္ ထားတယ္ ဒါေပမယ့္ မိဘေတြ နဲ႔ အတူ ေနေနတာဆိုေတာ့ ခ်ိန္း ေတြ႕ရတာ ေလာက္နဲ႔ သူ႔အေၾကာင္း ကိုယ့္အေၾကာင့္ အမွန္ မသိဘူး ဟန္ေဆာင္ ေနၾကတာေလ သုံးႏွစ္သုံးမိုး ေစာင့္ရင္လည္း အခ်ိန္ကုန္ သြားမယ္ အသက္ႀကီး သြားမယ္ မယူျဖစ္ ရင္ တစ္က ျပန္စ အသစ္ရွာ ရမယ္ ။
အိမ္ကို ခြင့္ေတာင္းၿပီး သူ႔အလုပ္ ကိုယ့္ အလုပ္ ၾကားထဲမွာ အဆင္ေျပတဲ့ အခန္းေလး ငွားေနတယ္ ၿပီးေတာ့ ဟင္းထမင္း ကိုယ္တိုင္ခ်က္ျပဳတ္ အဝတ္ ေလၽွာ္ မီးပူ တိုက္ သန္႔ရွင္းေရး ကို တာဝန္ ခြဲလုပ္ အိမ္လခ ေစ်းဖိုး မီတာခ ကုန္က် စရိတ္ေတြ ႏွစ္ေယာက္ မၽွခံ ဒါမ်ိဳးေတြ ကို ႏွစ္ေယာက္သား တာဝန္ယူၾကည့္ၾကတာ အဲ့မွာ ေယာက်္ား တစ္ေယာက္ဟာ ဂိမ္းပဲႏွိပ္ေန ၿပီး မိန္းမကို ဂ႐ုမစိုက္တဲ့ သူလား ဆဲဆိုၿပီး အရပ္တကာနဲ႔ ရန္ျဖစ္တတ္ သူလား ညဘက္ အခ်ိန္မွန္ အိမ္ျပန္ မအိပ္တတ္တဲ့သူလား သူငယ္ခ်င္း တသိုက္နဲ႔ ေသာက္စားမူး ယစ္ Ktv တက္လား ျပသနာကို ကိုယ့္ဘက္ ပါၿပီးေျဖရွင္း သလား အဝတ္ေတြကို ကြင္းလုံးခၽြတ္တတ္ တာက အစ ရႈးေပါက္ရင္ အိမ္သာ မွာ အစက္ၾက တာ ျပန္မသုတ္ တတ္တဲ့ သူလား အကုန္ ေလ့လာ လို႔ရတယ္ …
မိန္းမတစ္ေယာက္ ရဲ့ အေနအထိုင္ ပက္စက္ တာ အပ်င္းတစ္ၿပီး အိမ္မႈကိစၥ မလုပ္တာ ေဖ့ဘုတ္ထိုင္ပြတ္ ၿပီး ေနဖင္ထိုး မွထတာ အေမ့ အိမ္ ခနခနသြားၿပီး အခ်ိန္ ျဖဳန္းေနတတ္တာ အိမ္အကူ မရွိရင္ ဘာမွ မလုပ္တတ္ တာ ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြအေၾကာင္းအတင္းေျပာ ေပးစား တတ္တာ ဝင္ေငြ ထြက္ေငြမမၽွ ႂကြား ဝါ သုံးျဖဳန္းတတ္ တာ ဒါေတြ ေလ့လာလို႔ ရတယ္ … ညႇိၾကည့္ ရမယ္ ေျပာျပရ မယ္ တလ ႏွစ္လ ေျခာက္လ သင္ေပး ရမယ္ တခ်ိဳ႕ဆို ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ေနတယ္ ။ လက္မထပ္ ပဲ ကေလးေတာင္ယူ လိုက္ေသး ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ႏွစ္ဝက္ ေလာက္ ဆို အေျခအေန မဟန္မွန္းသိၿပီ သူႀကီး ပ်င္းလာတဲ့ Background Behaviour နဲ႔ Brought up က ကိုယ္ နဲ႔ ညႇိလို႔ မရဘူး သိလာၿပီဆို ယဥ္ေက်း စြာ လမ္းခြဲၾက႐ုံ ပဲ …
လခေတြ မိဘကို အပ္ရသလား ၊ ေမေမ့သားေလးလား ၊ တခုခုဆို အိမ္ေပၚကေန ဆင္းသြားတတ္လား ၊ဘယ္လို Dark side ေတြရွိလဲ သိလာမယ္
ကေလးရတာမရ တာက family planning ေပၚမူ တည္ပါတယ္ OG ဆီမွာ IUD ထည့္ မလား ေဆးေသာက္ မလား အကာ အကြယ္သုံးမလား က ႏွစ္ေယာက္ ေပၚပဲမူတည္ ပါတယ္ LT ေနေန မေနေန ျခဳံတိုး ၿပီး ကေလးရလို႔ မိဘမဲ့ေတြ တပုံႀကီးပါ ဒါကို ပတ္ဝန္းက်င္ က ေဝဖန္ေန တာ ဂ႐ုစိုက္ ရေအာင္ ကိုယ့္ကို သူတို႔မပိုင္ဘူးေလ သမာ အာဇီဝ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္တယ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ကို အေႏွာက္အယွက္ မေပးဘူး ဆိုရၿပီေလ ေဝဖန္တယ္ ဆိုတာ မနာလိုလို႔ပါ LTေနတဲ့ ကိစၥ က ဟိုတယ္နာရီပိုင္း လို မလြယ္ပါဘူး အိမ္ေထာင္ တစ္ခု လို တာဝန္ယူရ တာမို႔ ဟာသ အေနနဲ႔ မျမင္သင့္ ပါဘူးရွင္ တရားဝင္လက္ထပ္ၿပီး မွ စိတ္သေဘာ မတိုက္ဆိုင္ လို႔ ကြဲတာထက္ စာရင္ LT ေန႔ၾကည့္ တာ ပိုအဆင္ေျပပါ တယ္ …
ျခဳံတိုး ဟိုတယ္တက္ၿပီး သမီး အလိမ္မာေလး လို အ႐ုပ္ ပိုက္ၿပီး ေဘဘီေလး လို ဟန္ေဆာင္ေနၾကတာ ထက္ စာရင္ အပ်ိဳအစစ္လို တင္ရိုက္ေနၾကတာထက္ စာရင္ ဘဝကို ရင္ဆိုင္ ဖူးတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ကသာ ရင့္က်က္ တဲ့ စိတ္ထားရွိမွာပါ ။ ဘဝကို လက္ေတြ႕႐ုန္းခြင့္ ရွိပါတယ္ ျခဳံတိုး ဟိုတယ္ တက္ ၿပီး ျပတ္သြား အပ်ိဳ ဟန္ေဆာင္တဲ့ ေခတ္က က်န္ခဲ့ပါၿပီ ဒါေတြ က one night stand အထွာ ေတြပါ … .
Previous post ပုရိသတို့ရင်ကို ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားစေမယ့် ကိုယ်လုံးလေးကိုအမိုက်စားပုံစံလေးနဲ့ ကပြထားတဲ့ သံစဉ်မောင်ရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး
Next post တော်ရုံယောကျာ်းလေးတွေ လုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာကို လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ လုပ်ပြသွားလိုက်တဲ့ ပိုပိုရဲ့ အံ့ဖွယ်ဗီဒီယိုလေး